सडक विस्तार : किन सधैंको सकस ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण सडक विस्तार : किन सधैंको सकस ?
लेख | दृष्टिकोण4views
सडक विस्तार : किन सधैंको सकस ?
एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा बजारमा पर्ने ७ किलोमिटर सडकलाई त्रिभुवन राजपथबाट हटाउने निर्णय गरेपछि समर्थन र विरोधका दुवैथरी स्वर सुनिए । त्यो सडकको सट्टा पूर्वपश्चिम राजमार्गको रातोमाटेबाट राप्तीकिनार हुँदै चौकीटोलसम्म निस्किएको निर्माणाधीन बाइपास सडकलाई राजमार्ग कायम गर्ने निर्णयलाई कतिले सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपाका साझा उम्मेदवार कमल थापाको चुनावी चलाखीको संज्ञा दिन भ्याए । मुख्य शहरी सडकखण्ड दायाँबायाँका बासिन्दाले खुशीयाली मनाए । यो सरकारी कदम कायमै रहनेमा आशङ्काको कमी नभए पनि क्रियाको तत्कालीन प्रतिक्रिया अस्वाभाविक भने होइन ।
राजमार्ग विस्तारका विरोधाभासको कमी नभए पनि हेटौंडाबाट ५० किलोमिटर दक्षिण अवस्थित सीमान्त शहर वीरगञ्ज वर्षौंदेखि यो समस्यामा रुमलिइरहेको छ । सीमित विकल्पमा उभिएको हेटौंडाले निकास पहिल्याएको अवस्थामा यो आलेखको अभिप्राय सरकारी उदासीनता र नेतृत्वको स्वार्थको चेपुवामा परेको वीरगञ्ज महानगरमा सडक विस्तारका आयाम र निकासका उपाय खोतल्नुबाहेक अन्य होइन ।
विस्तारको आवश्यकता र आग्रह
भर्खरै महानगरमा स्तरोन्नति भएको वीरगञ्जलाई व्यवस्थित तुल्याउने सन्दर्भमा मौजुदा सडकको आयतन र विस्तार पक्कै पर्याप्त छैन । नगरको क्षेत्र विस्तार र शहरीकरणसँगै सडकको स्तरोन्नति अत्यावश्यकीय छ । फराकिला सडक, भौतिक संरचना र पूर्वाधारको उपलब्धता सहजताका आधारहरू हुन् । यसो भन्दैमा वीरगञ्जको अवस्थिति, उपलब्ध सडक पूर्वाधारको अवस्था र उपयोगितालाई तार्किक विश्लेषण नगरी निचोडमा पुग्नु बुद्धिमानी हुँदैन ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारका सन्दर्भमा स्थानीयको मत विभाजित छ । राजमार्गको मापदण्डअनुसार जसरी पनि सडक फराकिलो हुनैपर्ने एकथरी छन् भने मुख्य सडक विस्तारले सम्भावित क्षति बेहोर्नु पर्नेहरू सडकछेउका संरचना चलाउनै नहुने पक्षमा देखिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व भने आफ्नो आग्रह र भोटको राजनीतिमा यो विरोधाभासलाई उपयोग गर्न तल्लीन छ ।
सडक विभागले वर्षेनि त्रिभुवन राजपथको १ सय १६ किलोमिटरमध्ये विभिन्न क्षेत्र तोकेर २५/२५ मिटर दायाँबायाँको अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्दै आएको छ । अघिल्लो सूचना र कारबाही अदालती आदेशबाट रोकिएको हेटौंडाको सडक विस्तार यसपटक भने सूचना निकालिएको छोटै समयान्तरमा सरकारी निर्णयले किनारा लगाइदिएको छ । वीरगञ्जका लागि प्रत्येकपटकको सूचना अन्योलको औजारबाहेक अरू हुन सकेको छैन । यो स्थानीय नेतृत्वलाई भोटको राजनीतिक दुनो सोझ्याउने औजारमात्र बनेको छैन, केही टाठबाठाका लागि पहुँच देखाएर आर्थिक दुनो सोझ्याउने उपाय पनि बनिराखेको छ । चुनावको मुखैमा मन्त्रिपरिषद्बाट यो सडक विस्तारलाई लिएर हेटौंडाको अन्योल छिनोफानो भए पनि वीरगञ्जबारे राजनीतिक चासो नदेखिनुलाई स्थानीय नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा अथ्र्याउनेहरूको कमी छैन ।
वीरगञ्जमा सडक विस्तार मुख्य सडक क्षेत्रका बासिन्दाका निम्ति घाँटीमाथि झुण्ड्याइएको तरबारजस्तै सावित भइराखेको छ । स्थायी निकासको उपाय नभेट्दा प्रत्येकपटक सडक विभागको सूचनासँगै नेताको दैलो चहार्नु र आश्वासनको भारी बोकेर फर्किनु उनीहरूको दिनचार्या बनेको छ । सडक विस्तारका सन्दर्भमा वीरगञ्जको सरोकारसँग जोडिएको त्रिभुवन राजपथको उद्देश्य र अहिलेको उपयोगिताको ओजलाई पनि पुनरवलोकन गरिनुपर्छ ।
एकताका मुख्य नाका वीरगञ्जलाई राजधानीसित जोड्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो त्रिभुवन राजपथ काठमाडौंसँग अन्य राजमार्गको सम्पर्क जोडिएपछि उपयोगिता करीब सकिएको छ । वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नभएका शहर र स्थानमा ५० मिटरको मापदण्ड अनुचित नहोला । तर, हेटौंडामा निर्माणाधीन बाइपासलाई मुख्य शहरको संरचना जोगाउने उपाय बनाइँदा हेटौंडाको तुलनामा पर्याप्त विकल्प तयार भइसकेको वीरगञ्जमा मुख्य सडक आसपासको क्षेत्र सुरक्षित राखेरै निकास निकाल्न नसकिने कुनै कारण छैन ।
२०३१ सालको सार्वजनिक सडक ऐनले राजमार्गको दायाँबायाँ २५/२५ मिटरलाई सडकको क्षेत्राधिकार मानेको छ । तर, ऐन कर्यान्वयनमा आएको ४२ वर्षसम्म पनि सरकारी निकायहरूले सडक दायरामा पर्ने सम्पत्तिको किनबेच र राजस्व लिइराखेकै छन् । यो सरकारी मनपरीले समस्यालाई जटिल बनाएकोमा किन्तु परन्तु आवश्यक पर्दैन ।
समथर र शहरी क्षेत्रमा सडक ऐनअनुसार ५० मिटरका सडक विस्तार अहसज नभए पनि यो राजपथले समेटेको सबै क्षेत्रमा मापदण्डअनुसार सडक फराकिलो पार्न पक्कै सहज छैन । भोलिका दिनमा राजधानीसँगको छोटो दूरीमा निर्माण हुन गइरहेका द्रुतमार्ग र सुरुङमार्गजस्ता योजनाको ओजमा न्यून सम्भाव्यता समेटेको मार्गको उपयोगिता रहनेमा विश्वस्त हुने आधार पनि छैन । पूर्वाधार निर्माण लहडमा होइन, दीर्घकालीन उपयोगितालाई अग्रभागमा राखेर व्यवस्थापन गरिने विषय हो ।
वीरगञ्जमा अनेक विकल्प
शुरूमा एउटै मुख्य सडकको भरथेगमा चलेको वीरगञ्जको आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या अब त्रिभुवन राजपथको भरोसामा मात्र अगाडि बढिराखेको छैन । यो राजपथको पूर्वतिर ४ लेनको बाइपास सडक सञ्चालनमा छ । ४ लेनको बाइपासलाई ६ लेनमा स्तरोन्नतिको योजना अघि बढिसकेको छ । अहिले वीरगञ्ज नाकाको सम्पूर्ण आवागमन यही सडकबाट हुन्छ । बाइपासको पूर्वतिर नगर विकासको ४० फीटको सडक र पश्चिममा इनरबाइपास सञ्चालनमा छन् । यसै पनि मुख्य शहर र घना आवासीय क्षेत्रको बीचमा राजमार्गको अवधारणा अब काम नलाग्ने भइसकेको छ । अपवादबाहेक शहरको बीचमा राजमार्ग विस्तारको अभ्यास कहीँ पनि देख्न पाइँदैन ।
वीरगञ्ज मुख्य शहरको पश्चिमतर्फ अलौमा निर्माण भइराखेको नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएलगत्तै वीरगञ्ज भन्सार उतै सर्ने छ । आईसीपीबाट पथलैयासम्म ६ लेनको व्यापारिक सडक धमाधम निर्माण भइराखेको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै वीरगञ्जको व्यापारिक आवागमन आईसीपी–पथलैया सडकमा केन्द्रित हुनेछ । अहिले नै त्रिभुवन राजपथ रजतजयन्ती चोकदेखि गण्डकसम्मको सम्पर्क सडकमा सीमित भइसकेको छ । यस्ता पूर्वाधारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिएर उपयोगमा ल्याइनुपर्छ ।
उपलब्ध र निर्माणाधीन पूर्वाधार वीरगञ्जको मौलिकतालाई जोगाएर निकास खोज्ने आधारहरू हुन् । व्यवस्थित शरहरीकरणको खाँचो र उपलब्ध पूर्वाधारको दृश्यावलीमा मुख्य सडकका संरचना छुनै पाइँदैन भन्ने हठ र ऐन कानूनको रट दुवै सापेक्ष विकासका अवरोध सावित हुनेछन् । बढ्दो शहरीकरण र सवारीसाधनको चापले अहिलेको मुख्य सडकको ८ देखि १० मिटरसम्मको फैलावट सङ्कुचित हुनेमा द्विविधा छैन । यतिखेरै नगरक्षेत्रका भित्री सडकमा आपत्कालीन अवस्थामा दमकल र एम्बुलेन्ससमेत छिर्न नसक्ने अव्यवस्थाको पनि निकास खोजिनु बुद्धिमानी ठहर्छ । यसर्थ, यतिखेरै हेटौंडाका लागि निर्णय गरिएको ३२ मिटर सडक क्षेत्राधिकारलाई आधार मान्दा समस्याको गाँठो फुक्न सहज हुनेछ । यस निम्ति वीरगञ्जका सन्दर्भमा मुख्य सडकपूर्वको बाइपास वा पश्चिमतर्फको व्यापारिक सडकलाई राजमार्गका रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न नसकिने होइन ।
४ दशकअघिको सडक ऐन र सरोकारका कानूनले धरातलीय आवश्यकतालाई कचल्ट्याउने काम मात्र गर्छ भने त्यस्तो कानून बोकेर हिँड्नुको अर्थ नरहन सक्छ । हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिराख्दा नियम र प्रक्रियाको अभीष्ट विकास र जनहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु नयाँ विषय हुनेछैन । त्यस्ता कानूनी आधारले सापेक्ष विकास र अपेक्षामा अवरोध पु¥याउँछन् भने परिमार्जन र आवश्यकताअनुसार पुनर्निर्माणका निम्ति राजनीतिमा तत्परता चाहिन्छ । कानून जनताको हितमा आधारित विकासको साधन हो भन्नेमा नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ ।
प्रकारान्तरले वीरगञ्जको मौलिकता जोगाएर शहरीकरणलाई अघि बढाउन उपर्युक्त उपायको दीर्घकालीन कार्यान्वयन, त्यस निम्ति कानूनी आधार निर्माण र अवरोधको निदान यही क्षेत्रका राजनीतिक अगुवाहरूको दायित्व हो । यतिखेरै राजनीतिक दलहरू चुनावी अभियानमा सक्रिय भइराखेका छन् । वीरगञ्जको सापेक्ष विकासलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका प्रत्याशीहरूले आफ्नो जितपश्चात् निरन्तर सकस बनेको सडक विस्तारलाई पनि उपयुक्त निकास दिन्छन् कि भोट तान्ने तुरुप बनाउन अर्को चुनावसम्म समस्यालाई जीवित नै राख्छन्, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।